1600 baa iska dhiibtay Sweden labadii gelin ee ugu denbeysay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
1600 baa iska dhiibtay Sweden labadii gelin ee ugu denbeysay
La daabacay fredag 13 november 2015 kl 14.18
Inkastoo Sweden ay xaduudeeda kontorol ku soo rogtay haddana weli tirada qaxootiga ah ee Sweden iska dhiibaysa ayaa halkeeda maraysa.
24kii saac ee ugu denbeysay waxaa dalka iskadhiibtay oo mangeliyo weydiisatay tiro ka badan 1600 oo qof, sida laga soo xigtay hey’adda socdaalka Migrationsverket.
– Waxaan 24kii saac ee ugu denbeeyey qaabilnay qaxoot gaarya 1600 oo ruux, tiradan oo u dhiganta tirada aan qaabilnay todobaadyadii ugu denbeeyey, ayuu yeri Mikael Hvinlund oo warbaahinta u qaabilsan hey’adda Migrationsverket.
Tiradada qaxootiga ah ee dalka Sweden ku soo qulqulaysa ayaa weli halkeeda maraysay tan iyo intii xaduuda dalka lagu soo rogay kontorool. Wasiirka arrimaha gudaha Anders Ygeman ayaa maanta sheegay in aan weli la go’aamin karin natiijada ka dhalatay kontorolka xaduudaha, balse dadkii u socday Finland iyo Norwey ay hadda billaabeen in ay magangeliyo ka dalbadaan Sweden.
– Qaxootiga qaarkood kontorolka xaduuda wuu yaraynayaa halka qaarkooda kale ee iskadhiibaya Sweden soo badanyaan, ayuu yeri Anders Ygeman.
Boliiska xaduuda ayaa ku tilmaamay gobolada koonfurta iyo galbeedka in ay yahiin halka qaxootiga ka soo galayaan Sweden.
Maamulka magaalada Göteborg na maanta waxuu qabanayaa shir saxaafadeed lagu shaacineyso in maalmaha soo socda magaaladas ay soo gaari karaan caruurtii ugu badneyd ee keligood socda oo qaxooti doon ah iyo in magaalada xarumaaha ay ugu talogashay dhalankan ay buux dhaafeen aysan na jirin meel caruurtan lagu hayo.
Xataa magaalada Malmö ayey xaalada sidoo kale ku xuntahay, kuna soo bateen caruurta magangeliyo doonka ah ee keligood socda.
– Xalay waxaa qaabilnay 220 caruur ah, waxaana asaadaalineynaa maalin kasta in ay na soo gaari doonaan 200 oo caruur ah. Maanta waxaan gacanta ku heynaa 500 oo goobood oo aan caruurtan dejin karno, marka xaalka aad iyo aad buu noogu xun yahay, magaalada Malmö na arrin faraha ayey ka baxday, sidaas waxaa yeri Annelie Larsson oo Malmö u qaabilsan waaxda arrimaha bulshada.
Ururka dehmooyinka iyo gobolada SKL iyo hey’addo dowli ah oo badan ayaa ku qaban doona kulan shan degmo oo kalo ah Norrköping, Örebro, Umeå, Skellefteå iyo Gävle. Kulanka ayaa looga hadli doonaa sidii culuayska looga qaadi lahaa magaalooyinka kalo ah Trelleborg iyoMalmö, iyadoo lagala wareegayo masuuliyadda qaabilaadda caruurtan.
Guud ahaan dhanka hoyga qaxootiga ayaa dhibaato weyn ka ah Sweden, sida uu yeri Mikael Hvinlund oo warbaahinta u qaabilsan hey’adda Migrationsverket.
– Xaaladda waxay maraysaa heer dowladda aysan awoodin dhamaan qaxootiga in ay siiso damanad hoy, waayo qaxootiga ayaa ka badan boosaska aan heyno, ayuu yeri.